Teny tokony hialana amin'ny mailaka | Martech Zone
Teny tokony hialana amin'ny mailaka
Alatsinainy 13 Febroary 2012 Alahady 12 Febroary 2012 Douglas Karr
Nahatsiaro ho tsara kokoa tamin'ny fahazaran'ny mailaka nataoko aho rehefa avy namaky ity infographic avy any Boomerang ity. Ny mpampiasa mailaka antonony dia mandray hafatra 147 isan'andro, ary mandany mihoatra ny Adiny 2 sy sasany amin'ny mailaka isan'andro. Na dia tiako ho mailaka aza ny mailaka ary miasa izahay hampifangaro azy io ho toy ny paikady amin'ireo mpanjifanay rehetra, ireo karazana statistika ireo dia tokony hampatahotra anao hanova ny fomba marketing amin'ny mailakao.
ny mpamatsy mailaka mailaka tokony hanolotra fizarana sy fandaharam-potoana mba hahafahanao mampihena ny isan'ireo hafatra alefanao ary kendrenao mafy izy ireo… mahazo ny fahatokisana sy ny fifantohan'ireo mpamandrika. Ny famolavolana hetsika sy trangam-pandefasana hafatra sarotra dia azo tratrarina amin'ny fampiasana a automation marketing maotera.
Na izany na tsy izany, tsy azonao atao ny misintona isaky ny mailaka ao anaty fako… na ratsy kokoa… ao amin'ny fampirimana mailaka tsy misy dikany!
Ity infographic ity dia avy amin'ny Boomerang, plugin mailaka ho an'ny Gmail. Miaraka amin'i Boomerang, azonao atao ny manoratra mailaka izao ary mandahatra azy handefasana azy ho azy amin'ny fotoana mety. Soraty fotsiny ny hafatra araka ny fanaonao, dia tsindrio ny bokotra Send Send. Ampiasao ny mpikirakira kalandrie azonay na ny boaty fandefasanay izay mahatakatra ny fiteny toa ny “Alatsinainy ho avy izao” mba hilazana amin'i Boomerang ny fotoana handefasana ny hafatrao. Horaisintsika avy any.
Torolàlana momba ny karaman'ny media sosialy
Fomba 3 hampiasana fanadihadiana ho an'ny fikarohana eny amin'ny tsena tsara kokoa
13 Feb 2012 tamin'ny 11:10 maraina
Raha ny fandraisana hafatra 12 dia midika ho asa 90 minitra, inona no tena dikan'izany? Ary maninona no miasa amin'ny programa hafa ankoatry ny programa mailaka mihitsy no tafiditra ao anatin'ny infografikao momba ny mailaka?
13 Feb 2012 tamin'ny 11:18 maraina
Salama @ariherzog:disqus ! Mizara ny mombamomba an'i Boomerang eto izahay ary maneho hevitra momba izany… tsy anay izany. Raha ny momba ny asa ivelan'ny mailaka, mino aho fa manandrana mijery ny ezaka fanampiny ateraky ny mpampiasa mahazatra izy ireo rehefa mamaky mailaka. Ny mailaka azonay dia mitaky anay hanao asa alohan'ny hamaliana. Izany no hevitra. Raha ny zava-misy dia naharay ny taratasinao ho mailaka aho, mitaky ahy hijery indray ny infografika ary hamaly anao. Na dia tsy asa mifototra amin'ny mailaka aza izany, dia noho ny mailaka ho ahy no nahatonga azy io.
Febroary 13, 2012 amin'ny 1:40 PM
Misaotra tamin'ny fizarana ny infografikay Doug. Nahafinaritra ny fiaraha-miasa tamin'i Boomerang i Lemon.ly.
15 Feb 2012 tamin'ny 11:12 maraina
Tsy isalasalana fa tototry ny mailaka mailaka izahay. Izany no antony maha-zava-dehibe ho an'ny mpivarotra ny manapaka ny tabataba. Mahasoa ny fahafantarana ny fotoana handefasana azy. Andramo izany mba hahitana hoe inona ny ora miteraka ny tahan'ny misokatra tsara indrindra.